Onkod iyo roobab xooggan oo laga filaayo gobollo dalka ka mid ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Alan Jocard/Scanpix
Onkod iyo roobab xooggan oo laga filaayo gobollo dalka ka mid ah
La daabacay tisdag 6 augusti 2013 kl 09.19
Machadka saadaasha hawada (SMHI) ayaa ka digaya in roobaab xooggan oo onkod iyo dabayl wata la filayo maanta gelinka dambe gobollada ay ka mid yihiin Västra Götaland, Kronoberg, Jönköping och Halland. Waxaa kaloo la filayaa in roobabkaasi saamayn doonaan qaybo kale oo dalka ka mid ah.
- Waxaa keena dabaylo ka yimid koonfur-galbeed. Kolka ay is hirdiyaan dabaylo qabow iyo kuwo kulul waxaa ka dhasha roobab iyo gugac xooggan, ayuu yiri Marcus Sjöstedt, oo hawa-saadiye ka ah machadka SMHI.
Dabaysha qabow oo ka imaneysa koonfur-galbeed ayaa ayaa sare u qaadeysa hawada dhulka oo markii ay kor tagto sii kululaaneysa. Kolka waxaa samaysma dabaylo, waxaana wehelin kara onkod.
- Hadda waxay hawadaasi dul mareysaa qaybo ka mid ah Daanmark, laakiin manta gelinka dambe soo gaarayaan gobolada xeebta galbeed, kadibna gobolada Småland, Skaraborg iyo agagaarka harada Vänern.
Digniintaan oo hadda khuseysa gobolada Västra Götaland, Kronoborg, Jönköping och Halland, waxaa lagu qiyaasay digniin derejada koowaad, taas oo ah derejada ugu hooseysa heerbeeg ka kooban saddex derejo.